नेकपामा जग्गा दलालको जालो
नेकपामा जग्गा दलालको जालो बालुवाटार जग्गा काण्डमा देउवा र भट्टराई मुछिएपछि नेकपालाई राहत !
विमल पाेखरेल काठमाडाैं, १९ वैशाख
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसम्मले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपेपछि जग्गा काण्ड छताछुल्ल भएको छ । जग्गा काण्डमा धेरै व्यक्तिको नाम मुछिने क्रम जारी छ । यसै क्रममा दोष आफूतिर सोझिएपछि नेकपाका केही केन्द्रीय नेताले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि प्रहार गरेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले महासचिवले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताएका थिए भने केही केन्द्रीय नेताले महासचिव पौडेल जोगाउन परिस्थितिलाई अर्कैतिर मोड्न पूरा शक्ति लगाएका छन् । पौडेल पक्षका व्यक्तिले पौडेललाई चोख्याउन लेखिएका एउटै समाचार दर्जनौंपटक सेयर गरिएका छन् ।
सामान्य मान्छेले अनुमान गर्छ, शक्तिशाली व्यक्तिको संलग्नता र संरक्षणबिना बालुवाटारको त्यति धेरै जमिन व्यक्तिको नाममा जाँदैन ।
सञ्चारमाध्यमले मिलेमतोमा जग्गा हडपिएका विभिन्न तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ती तथ्यलाई तोडमोड गरेर आफ्ना नेतालाई निर्दोष साबित गर्ने र अरूमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयत्न हुनुले दोषीमाथि कारबाही हुन नदिन ठूलठूला प्रयत्न भइरहेको सहजै बुझिन्छ । जुन दृश्य देखिँदै छन्, ती अत्यन्तै घिनलाग्दा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले माफियाको योजनामा मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जमिन हडप्ने निर्णय गराउनु देशका लागि धेरै दुःखदायी अवस्था हो । कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, निर्णय गरिसकेपछि आफूलाई चोख्याउन गरिएका प्रयत्न त्यसभन्दा खतरनाक छन् । केपी शर्मा ओलीले बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णयप्रति कस्तो व्यवहार देखाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।
जग्गा रोक्का राख्दैमासरकारको नाममा जग्गा आउने होइन । व्यक्तिको नाममा हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइन्छ या ल्याइन्न, त्यो त पछि नै थाहा होला ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका प्रतिलिपिलाई सञ्चारमाध्यममार्फत नेकपा नेता कार्यकर्ताले व्यापक प्रचार गरेका छन् । तर, उनीहरू पौडेलले खरिद गरेको जग्गाको लालपुर्जाबारे किन मौन छन् ?
चोरी मुद्दाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार चोर्ने चोर भइहाल्छ । उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । चोरीको सामान हो भन्ने जान्दा जान्दै उक्त सामान किन्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ । अहिले नेकपा महासचिव पौडेल त्यही अवस्थामा छन् । बालुवाटारको जमिन चोरिएको होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि जग्गा दलालसम्म सबै मिली महाप्रपञ्च रचेर सरकारी जग्गा हडपिएको हो । यो चोरीभन्दा कैयौं गुणा घृणित तथा कानुनविपरीत कार्य हो । पौडेल जग्गा दलाल नहोलान्, बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्रीमा उनको संलग्नता नहुन सक्छ । तर, सरकारी जग्गा हो भन्ने जान्दा जान्दै त्यो जमिन किन्नु आपराधिक कार्य हो ।
सामान्यतया जग्गा किन्दाअगाडि कसरी किनबेच भएको थियो भन्ने विषय हेरिन्छ, मोही हेरिन्छ । छेउछाउका चारकिल्ला र तिनका मोही हेरिन्छ । त्यत्ति पनि नहेरी पौडेलले जग्गा किनेका हुन् भन्ने सोच्नु मूर्खता मात्र हुनेछ ।
पौडेलले २०६१ सालमा त्यो जग्गा किने । त्यतिखेर घरजग्गामा चर्काे मूल्यवृद्धि भएको थियो । बालुवाटारमा ५० हजार आनामा किनबेच हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
साथीभाइले पौडेललाई सस्तोमा जग्गा दिए होलान् । तर, त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कसैले पनि त्यत्तिकै सस्तोमा जमिन दिँदैन । उसलाई गुन लगाएको हुनुपर्छ । पौडेलले जो व्यक्तिसँग जमिन किनेका छन्, ती जग्गाका कारोबारी भएको खुलिसकेको छ । ती व्यक्तिले सरकारी जमिन हडप्न संलग्नता देखाएका छन् । तिनलाई चोख्याउन र शक्तिको आडमा वैधानिक बनाउन यी सारा खेल भएका हुन् भन्ने छर्लङ्ग हुँदा हुँदै पौडेलको कुनै संलग्नता छैन भन्नु सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चबाहेक अरू केही होइन । बरु उनको संलग्नता कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा त छानबिनपछि नै थाहा हुने कुरा हो ।
कुनै संलग्नता छैन भने छानबिनले प्रमाणित गर्नुपर्दछ । कुनै छानबिन नहुँदै चोख्याइनु नेकपा नेता कार्यकर्ताको धूर्तताबाहेक अरू केही होइन ।
कारबाही नहुने खतरा
बालुवाटार जग्गा काण्डमा बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, विजयकुमार गच्छदारसमेत मुछिएका छन् । शक्तिशाली मान्छे मुछिएका काण्डमा कुनै कारबाही नभएका कैयौं दृष्टान्त हामीसामु छर्लंगै छन् । त्यसैले यस काण्डमा संलग्न कसैलाई कुनै कारबाही हुनेछैन ।
वाइडबडी काण्डमा जतिबेला रवीन्द्र अधिकारीमाथि प्रहार गरियो, त्यतिबेला सबैले उनीमाथि कारबाहीको आवाज उठाए । जब उक्त काण्डमा शेरबहादुर देउवालगायतका नेता मुछिए, तब त्यसलाई सामसुम पार्ने ठूलै कसरत भयो ।
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा रवीन्द्रको निधन भएपछि वाइडबडी काण्ड त्यत्तिकै सेलाएर गएको छ । रवीन्द्र दोषी भएको भए पनि अब उनीमाथि छानबिन वा कारबाही हुने कुरा भएन । तर, रवीन्द्रको निधनपछि अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेले चोखिने मौका पाए । वाइड बडी काण्डमा संलग्न भ्रष्टले खुसी मनाइरहेका होलान् । एउटा हेलिकोप्टर दुर्घटना सँगसँगै ६ अर्ब भ्रष्टाचार काण्ड सेलाएर गएको छ ।
बालुवाटार जग्गा काण्डमा बाबुराम भट्टराई आत्मालोचना गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया त्यस्तै प्रकृतिका छन् । तर, संसद्मा बोल्ने क्रममा उनले आफू दोषी ठहरिएमा कारबाही भोग्ने बताएका छन् । अर्कातर्फ माधव नेपालको नाम मुछिएको समयमा उनी चीन भ्रमणमा थिए । उनी चीनबाट फर्किएलगत्तै अमेरिका गएका छन् । त्यसबारे उनले केही बोलेका छैनन् । शेरबहादुर देउवाको नाम मुछिएपछि उनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
कांग्रेस भ्रष्ट, कम्युनिस्ट चोखा ?
नेपालमा एउटा गज्जबको परिदृश्य देखिन थालेको छ । नेकपा नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्मको भ्रष्टाचार, महँगी, बेतिथि सबै कांग्रेसका कारणले भएको बताइरहेका छन् । उनीहरू कांग्रेसमाथि आरोप थोपर्न दिनरात व्यस्त छन् ।
नेकपा नेता कार्यकर्तामा पार्टीका उच्च तहका नेता विविध काण्डमा मुछिँदै जाँदा अर्काेपटक सत्ता खोसिन डर छ त्यसैले उनीहरूले सबै समस्याको जड कांग्रेस भएको बताइरहेका छन् । यो क्रम आगामी ४ वर्षसम्म निरन्तर जारी रहनेछ । मानौं, नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ता दूधले नुहाएका छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही भोग्ने कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता र चिरञ्जीवी वाग्ले मात्रै हुन् । उनीहरू केही लाख वा करोड मात्रै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएपछि जेल गएका थिए । तर, अहिले त अर्बौंं अर्बको भ्रष्टाचारमा मुछिँदा जेल जाने कल्पना त छोडौं, मुद्दासमेत चलाइएको छैन ।
नेपालमा कम्युनिस्टको लोगो र आवरण बडो गज्जबसँग खपत भइरहेको छ । सर्वहारा र गरिबको राजनीति गरेको छु भन्न पनि पाइने । अर्बौं अर्बको घोटाला गर्न पनि पाइने । त्यो घोटालामा आफ्नो नाम मुछिन थाल्यो भने त्यो त गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको निर्णय हो भनेर उम्किन पनि पाइने । यति धेरै सुविधाको पाखण्ड सायदै कुनै सरकारलाई प्राप्त छैन । यसको परिणाम देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ । त्यसका लागि धेरै शब्द खर्चिनु आवश्यक छैन ।
अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ताले बालुवाटार जग्गा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएपछि ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । नेता कार्यकर्ताले शेरबहादुर र बाबुराम भट्टराईमाथि सबै दोषा दिएर नेता चोख्याउने अभियान सुरु गरेका छन् । उनीहरू यसमा सफल भए आश्चर्य मान्नुपर्दैन किनकि नेकपाको हातमा दुई तिहाइको सरकार छ ।
नेकपा कार्यकर्तामा देउवा र भट्टराइको अनुहार धेरै हिलो तर नेपाल र पौडेलको अनुहारमा अलिकति मात्रै हिलो लागेको भ्रम छ । यसरी उनीहरूले राहत महसुस गरिरहेका छन् ।
यसो गरिए भने नेपालको राजनीति थप नयाँ तर दुर्भाग्यपूर्ण मोडमा पुग्नेछ ।
वर्तमान सरकारले प्रगतिशील भूमिसुधार ल्याउनुपथ्र्याे । सुकुम्बासीहरूलाई बासको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । हदबन्दीभन्दा धेरै जमिन जफत गर्नुपथ्र्याे ।
सरकार र पार्टीले गर्नुपर्ने सारा काम त्यागेर सरकारी जमिनलाई हडपेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा भए भरको शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । यो वास्तवमा कलंकित व्यवहार हो । जग्गा दलाललाई अगाडि सारेर सरकारी जमिन आफ्नो नाममा जोड्नु जतिको कलंकित कार्य के हुन सक्छ ?
जग्गा दलाललाई अगाडि सारेर सरकारी जमिन हडप्ने ध्याउन्नमा लागेका मान्छेहरू कति छन् भन्ने कुराको फेहरिस्त खुल्दै जानेछ । त्यसको कनेक्सन माधव नेपालदेखि विष्णु पौडेलसम्म सीमित रहेको छैन भन्ने कुरा अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १९, २०७६, ०५:३९:००
के गर्दै छन् कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल ?